Dowladda Qadar oo Ergay Cusub usoo Dirsysa Soomaaliya.
April 30, 2021 | Posted by admin
Ergayga gaarka ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Qatar u qaabilsan La Dagaalanka Argagixisada iyo Dhexdhexaadinta Khilaafyada Dr. Mutlaq bin Majed Al-Qahtani ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu soo gaaro caasimada dalka ee Muqdisho.
Ujeedada ergeygan oo aan is rasmi ah loo shaacin ayaa lagu macneeyay inay tahay sidii uu dhexdhexaadin uga geysan lahaa khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya.
Dowlada Qadar ayaa xiriir wanaagsan la leh dowlada Soomaaliya waxaana mashaariic badan ay ka hirgelisay dalka Soomaaliya.
Dadka arrimaha siyaasada lafagura ayaa sheegaya in ergeygan uu isk udayi doono sidii uu u xalin lahaa mashaakilka ka jira arrimaha doorashooyinka.
Ergeygan oo ah nin waayarag ku ah dhexdhexaadinta khilaafyada ayaa hore uga soo shaqeeyay sidii loo xalin lahaa khilafka dowlada Maraykanka iyo ururka Daalibaan ee dalka Afghanistan,waxayna qaramada midoobay u aqoonsatay dhexdhexaadiyaha ugu wanaagsan caalamka sanadkii 2020.
Dowlada Qadar ayaa dhowaan beenisay in lacag gaar ah ay siiso dowlada Soomaaliya gaar ahan taliyaha nabadsugida Fahad Yaasiin oo xiriir dhow la leh dowlada Qadar.
Booqashada ergeygan ayaa ku soo beegmeysa iyadoo xilli xasaasi ah ay marayso siyaasada dalka Soomaaliya.
« Dab xoogan oo ka kacay Goob Ganacsi oo ku yaala Muqdisho (Sawiro)
Farmaajo oo Ku fashilmay siyaasadii dalka (Akhriso sababta) »